Notsoahan’ny mpampanoa lalàna Azerbaijani ny fiampangana niteraka resabe an’ilay gadra politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2019 3:51 GMT
Fihetsiketsehana ny 19 Janoary ho fanohanana ilay gadra politika Mehman Huseynov. Telo andro taty aoriana, nanambara ny biraon'ny mpampanoa lalàna fa vao notsoahana ny fiampangana azy . (Sary: Musavat Party. Nampiasaina tamin'ny Eurasianet voalohany)
Ity manaraka ity dia tantara avy amin'ny Eurasianet ary navoaka indray eto amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fiaraha-miasa.
Nanapa-kevitra ny mpampanoa lalàna fa hanala ny fiampangana tamin'ny heloka bevava ho an'ilay bilaogera nogadraina sady mpikatroka, Mehman Huseynov, taorian'ny nanomezan'ny filoha Ilham Aliyev baiko ny amin'ny hijerena indray ny raharaha mahakasika ity bilaogera ity.
Nambaran'ny biraon'ny Fampanoavana ao Azerbaijan tamin'ny 22 Janoary ny fahagagana tamin'ny famaranana ity trangana heloka bevava vaovao ity .
Mehman Huseynov, 26 taona, no bilaogera-politika malaza indrindra ao Azerbaijan ary nanefa sazy roa taona an-tranomaizina noho ny fanalana baraka ny polisy. Noafahana izy tamin'ny volana Martsa 2018, saingy ny faran'ny volana Desambra 2018 dia namoaka ny fiampangana azy vaovao ny manampahefana Azerbaijani, ary nilaza fa nidaroka mpiambina ny fonja i Huseynov. Nandà ny fiampangana azy vaovao izay mety hanampy taona maromaro indray tamin'ny fanefany saziny i Huseynov ary nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina mba hisarihana ny saina momba ny toe-javatra sarotra hatrehiny.
“Nolavina ny fiampangana an'i Huseynov tamin'ny heloka bevava noho ny fahatanorany, noho ny tsy fisian'ny fandikan-dalana nandritra ny fe-potoana nanefany sazy, ny fiovàny, ary noho ny rainy efa zokiolona izay mila fikarakarana”, hoy ny biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana tao amin'ny fanambarana .
Roa andro taorian'ny nanambaràn'ny governemanta fa nanao antso manokana tany amin'i Aliyev i Huseynov no nivoaka ny vaovao ary nangataka azy mba “hanome baiko ny hanaovana fanadihadiana marina momba ny raharahany.” Nolaviny fa nidaroka mpiambina izy ary nilaza fa “raha hahazo fanamelohana vaovao indray izy dia ho hatairana lehibe ho an'ny rainy 70 taona izany.” Tsy voafaritra manokana raha i Huseynov no nanoratra ity taratasy ity na tsia. Nilaza tamin'ny Meydan TV ny iray tamin'ireo mpisolovava an'i Huseynov, Fuad Agayev, fa tsy fantany ity antso natao ity.
Nitohy ihany koa tamin'ny famoriam-bahoaka lehibe tao Baku ho fanohanana an'i Huseynov tamin'ny 19 Janoary teo. Niteny ireo mpikarakara fa olona miisa 25.000 no nanatrika izany, raha ny polisy kosa dia nilaza isa tamin'ny 2 800. Na izany na tsy izany, lehibe noho ny maro nantenaina ary toa hita fa lehibe indrindra tamin'ny fihetsiketsehana tao amin'ny firenena tao anatin'ny dimy taona ity fihetsiketsehana ity. Ilay mpanao gazety mpanao famotorana malaza, Khadija Ismayilova, iray amin'ireo mpikatroka marobe izay nanao fitokonana tsy nihinan-kanina ho firaisankina tamin'i Huseynov, no nanambara avy eo fa hanajanona ny fitokonany izy ary nampifandray izany tamin'ny fihetsiketsehana lehibe. “Nasehon'ny fihetsiketsehana androany fa mifoha ny fiarahamonina ary mafy noho ny hanoananay ny feon'izy ireo,” hoy izy nanoratra tao amin'ny Facebook .
Fuad Alasgarov, mpanolotsaina lehibe an'i Aliyev nilaza fa nihetsika ny filoha tamin'ny fanarahana ny antson'i Huseynov. “Mora tohina hatrany i Aliyev amin'ny karazana fangatahana toy izany, ary nanaraka ny fitsipiky ny rariny sy ny maha-olombelona, ary mitaky ny toy izany avy amin'ireo manampahefam-panjakana rehetra ,” hoy Alasgarov.
Faly tamin'ilay vaovao ireo mpikatroka naman'i Huseynov. “Hivoaka ny 3 Martsa i Mehman hoy ny HamamTimes nanoratra, lahatsoratra fanesoana izay i Huseynov no niara-nanorina azy tao amin'ny pejy Facebook-ny tamin'ny 22 Janoary.” Miarahaba ny vahoaka Azerbaijani izahay. Firaisankina! “
“Vitan'ny vahoaka ho'aho,” hoy i Habib Abdullayev, mpandrindra ny tambajotra sosialy ho an'i Meydan, tao amin'ny pejiny Facebook. “Raha misy zavatra tadiavinao dia tsy maintsy miady ho amin'izany ianao.”
Saingy nampitandrina ny tsy hiantso izany ho faharesen'ny governemanta ny olona sasany. “Dingana mankany amin'ny fandrosoana izany” ho an'ireo manampahefana, hoy i Ismayilova nanoratra taorian'ny fanambarana nataon'ny governemanta. “Mbola manantena aho fa hahita izany ho lojika sy hendry amin'ny fanafahana ireo gadra politika rehetra ny Filoha Aliyev. Tsy faharesena izany fa ho fandresena hitondra ny firenena ho amin'ny dingana vaovao maoderina. “
Araka ny tatitry ny Human Rights Watch tamin'ny taona 2018, “Farafahakeliny mpiaro ny zon'olombelona, ​​mpanao gazety, mpikatroka ara-politika sy ara-pinoana miisa 43 no mbola migadra tsy ara-drariny any am-ponja, ary mbola am-polony maro no notanana na mbola eo ambany fanadihadiana momba ny heloka bevava sy niatrika fandrahonana ary ny fandrarana tsy hivoaka ny faritra, na nandositra an'i Azerbaijan.”